9 beddel oo loogu talagalay Adobe Fireworks | Abuurista khadka tooska ah
Adobe FireWorks waa qalab weyn, laakiin maalmahan, waxaa jira barnaamijyada beddeli kara barnaamijkan Adobe ee caanka ah ugu dambayntii bishii Meey 2013, Adobe lafteeda ayaa ku dhawaaqday in la joojinayo.
Hoos waxaad ka heli doontaa 9 qalab oo si fiican u beddeli kara farqiga u daayay FireWorks iyo in sida xaqiiqada ah ay awoodi doonaan inay kaa yaabiyaan sida ugu wanaagsan ee loo qaabeeyay.
1 Xarafka 3
2 Mashruuca EvolveUI
5 Naqshadeynta Affinity
8 Inkscape Iskuxir Si Xor Ah
Sketch waa aalad naqshad u ah Mac. Sketch has been loo sameeyay naqshadeeyayaasha garaafka casriga ah waana tan lagu muujiyey gees kasta oo arjiga ah.
Waxay taageertaa bogag badan, fursadaha sare si loo dhoofiyo lakabyo cabbir kasta ama astaamo awood leh sida qaababka ama astaamaha la wadaago. Qalabka vektorka waa kuwo awood badan waxaadna ku iibsan kartaa $ 79.
EvolveUI waa codsi loogu talagalay naqshadeeyayaasha khibradda sare leh, naqshadaha iyo horumariyeyaasha websaydhka. EvolveIU waa interface ah oo lagu dhisay qalab qalab ah naqshadeynta iyo API-ga loogu talagalay Linux, PC iyo Mac.
Waxaad awoodi kartaa samee walxaha vector oo aad ku dabaqdo qaababka sheyga ee ka dhex shaqeeya daalacashada, xitaa inaad u keento noocaaga.
Skala waa barnaamij loogu talagalay Mac oo leh interface interface iyo qalab loogu talagalay Naqshadeynta Icon oo leh tayo dhiibid iyo isku darka wanaagsan ee vector, bitmap iyo xirfadaha 3D. Waxaa la heli doonaa dhammaadka sanadkan.
Gravit waa a app design lacag la'aan ah taasna waxaa laga abuuray meel hoose oo xoogga la saarayo kala duwanaansho, dareemo iyo xarrago.
Naqshadaha ugu cakiran waxaa laga abuuri karaa qalabkeeda adag iyo jawi si dhaqso leh uga jawaaba isticmaalaha. Astaamaha sida qalabka far-qorista, ama isticmaalka saxda ah ee adeegsadaha isticmaalaha oo ujeedkiisu yahay waxqabad.
Dhawaan waxaan ka hadalnay tan xoogga badan waa mid ka mid ah Softwares naqshadeynta vector-ka oo sax ah iyo soonka xilligan. Haddii ay tahay in laga shaqeeyo boggaga internetka, astaamaha, ama kaliya qaabeynta is-dhexgalka isticmaalaha.
Antetype waa naqshadaynta ugu horreysa ee diirada saareysa iyo software lakabinta qaab muuqaal ah, oo ay sameeyeen naqshadeeyayaasha adeegsadayaasha isticmaalaha. Qalab muhiim u ah badbaadinta waqtiga abuurista iyo hagaajinta noocyada naqshada naqshadeynta isticmaalaha.
GIMP waa gaabinta loogu talagalay Barnaamijka Wax Ka Qabashada Sawirka GNU. Barnaamij bilaash ah oo caan ah oo xaliya hawlaha sida dib-u-hagaajinta sawir, sawir sameynta, iyo qorista. GIMP waxaa loo abuuray iyada oo loo eegayo in lagu dheereyn karo fiilooyinka.
Inkscape Iskuxir Si Xor Ah
Inkscape waa a Tafatiraha sawirada vector-ka ee Windows, Mac OS X iyo Linux. Haddii aad tahay sawirqaade, naqshadeeye ama qof u baahan inuu abuuro nooc ka mid ah muuqaalka vektorka, 'Inkscape' ayaa jawaab u ah raadintaada.
Acorn waa a tifaftiraha sawirka ee Mac OS x. Waxay bixisaa taageero lakabyada, wajiyadda, alfas, iyo gradients. Waxay bixisaa suurtagalnimada in la soo dejiyo oo la dhoofiyo faylasha PSD.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » 9 qalab oo lagu beddelo Adobe Fireworks